Madheshvani : The voice of Madhesh - सर्लाहीमा प्रहरीले कम्युनिष्टको अहंकार बोक्यो : डा.अमरेश कुमार सिंह
सर्लाहीमा प्रहरीले कम्युनिष्टको अहंकार बोक्यो : डा.अमरेश कुमार सिंह
डा.अमरेश कुमार सिंह, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
० नेपाली कांग्रेस र सुरक्षाकर्मीबीच सर्लाहीमा के कारणले झडप भयो ?
— हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना र प्रदर्शनको पक्षमा थियौं । हत्या गरिएका महेन्द्र रामको श्रीमति, उनका भाई र हजारौं दलितहरु, जसमा बढी महिलाहरुको सहभागिता थियो, सहित हामी न्यायका लागि प्रदर्शन र धर्ना दिन गएका थियौं । हत्या भएको एक हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रहरीले जाहेरी पनि दर्ता गरेको छैन, शव पनि पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको छैन । प्रहरीले मृतक महेन्द्र रामको शव कब्जा गरी राखेको छ । दोषीमाथि कुनै किसिमको कानूनी कारबाही अगाडि बढाएको छैन । अहिलेका एसपी सन्तोष सिंह राठौरले सत्ताको दलाली गरेर नेकपाको कार्यकर्ताको रुपमा जनतालाई धम्की दिइरहेका छन् । हामी धर्ना र प्रदर्शन गरिरहँदा एकाएक अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज भयो । त्यसमा तीन दर्जनभन्दा बढी काँग्रेस कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । अहिलेका एसपी र डिएसपीको रवैया सुध्रिएन भने जनता प्रतिकारमा उत्रिन्छन् । मैले जनतालाई आह्वान गरिरहेको छु कि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा उभिनुपर्छ । सर्लाही जनता न्यायप्रेमी जनता हुन, दलितमाथि जुन अन्याय भएको त्यसको पक्षमा जनता उठ्छन् । त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौं ।
० शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ढुंगामुढा किन गराउनुभयो त ?
— हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ । तपाइँले विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ । प्रदर्शनकारीले शान्तिपूर्णरुपमा न्यायका लागि प्रदर्शन नै गरिरहेका थिए तर सुरक्षाकर्मीले एकाएक अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गर्न थाले । प्रदर्शनकारीहरु त ढुंगामुढा बोकेर गएका थिएनन् । हामी त्यहाँ शान्तिपूर्ण धर्नाका लागि गएका थियौं । कम्युनिष्टको लोकतन्त्र यही हो कि जनताले न्यायका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र धर्ना पनि दिन नपाउने ? प्रहरीको जुन ज्यादती र बर्बरता छ त्यो एकदमै निन्दनीय छ ।
० महेन्द्र राम हत्याको जाहरी प्रहरीले किन लिन मानेको छैन त ?
— किनकि महेन्द्र रामको हत्यामा नेकपाका दुई जना कार्यकर्ता सहभागी छन् । प्रहरी भन्छन्, नेकपाको कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउन पाइँदैन । संविधान र मानवअधिकारको भावना यो होइन कि सत्तारुढ दलका नेताले अपराध गर्न पाउनुपर्छ । अपराधी जोसुकै होस्, कारबाही हुनुपर्छ । कुनै पार्टी वा सत्ताको उन्मादमा दोषीलाई उम्काउने जुन खेल हुन्छ, त्यसलाई जनताले सहन सक्दैन । दलितमाथि अहिले श्रृंखलाबद्धरुपमा ज्यादती भइरहेका छन् । धनुषामा प्रहरी हिरासतमा दलितलाई कुटेर मारिएका घटनाहरु पनि ताजै छ । जनता उठेपछि एसपी र डीएसपी निलम्बन भएका छन् । यहाँका जनता पनि उठ्छन् र एसपी र डीएसपी निलम्बनमा पर्छन् ।
० महेन्द्र रामको शव प्रहरीले किन दिन नमानेको होला ?
— महेन्द्र रामको शव प्रहरीले आफनो कब्जामा राखेको छ । घटनाको दिन म त काठमाडौंमा थिएँ । पीडित परिवारले न्याय नपाएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर आवाज उठाउँदै छु । मेरै निर्वाचन क्षेत्रका दलितले यदि न्याय पाउँदैन भने म केको लागि जनप्रतिनिधि हो ? तलब र भत्ता मात्रै खानका लागि जनप्रतिनिधि बनेको होइन । यसकारणले, महेन्द्र रामको शव किन दिन मानिरहेको छैन भन्ने कुरा यहाँका एसपी र डीएसपीलाई सोध्नुस् । एसपीलाई सोध्नुस् कि महेन्द्र रामको शव परिवारलाई किन दिइएन, उसको दाहसंस्कार किन भएन ? यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनताले तानाशाह स्वीकार गर्दैन । हामीले दलितको न्यायका लागि अहिले गाउँ–गाउँ जनतालाई जनगरुक बनाइरहेका छौुं । हाम्रो नारा नै हो कि ‘चलु मलंगवा, भरु मलंगवा’ । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । यो मेरो व्यक्तिगत आन्दोलन होइन, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको आन्दोलन हो र यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । प्रहरीको यो दमनप्रति नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण देशभरिकै नेता कार्यकर्ताको ध्यानाकर्षण भएको छ । महेन्द्र रामका परिवारले यदि न्याय पाएन भने कांग्रेसले प्रदेश २ मात्रै होइन, देशब्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्छ ।
० तर, शव नदिनुको कारण तपाइँ के देख्नुहुन्छ ?
— यहाँका एसपी सन्तोष सिंह राठौर कुनै जमानामा प्रचण्डजीको पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) थिए । उनलाई लाग्या होला म नै प्रचण्ड हो, मलाई कसैले छुन सक्दैन । त्यसकारणले प्रचण्डजीको कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउन मिल्दैन । प्रचण्डजीको नाम लिएर एसपी राठौरले यहाँका जनतालाई धम्काइरहेका छन् । तर, प्रचण्डको नामबाट सर्लाही वा मधेशका जनता डराउनेवाला छैनन् । मैले संसदमा पनि भन्ने गरेको छु कि अहिले नेपाल प्रहरी होइन, नेकपा प्रहरी छ । नेकपा प्रहरीको संख्या यदि ८० हजार छ भने नेपाली कांग्रेसको पनि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता प्रहरी नै हुन । हरेक जनता कांग्रेसका लागि प्रहरी छन् । त्यसले गर्दा आजको दिनमा पनि जति नेपाल प्रहरी छन्, त्यसको हजार गुणा बढी कांग्रेसका कार्यकर्ता छन् ।
० बुधबार प्रदर्शन गर्दा झडप भयो, सयौं घाइते भए । अब के गर्नुहुन्छ ?
— फेरि हामी प्रदर्शन गर्छौं । अहिले पनि तपाइँसँग कुरा गरिरहँदा म गाउँ–गाउँमा जनताका बीच गएर छलफल र सल्लाह गर्दैछु । जनतालाई बताइरहेको छु कि दलितमाथि अन्याय भइरहेको छ अब हामी उठ्नैपर्छ । जनताले पनि बुझिरहेका छन् । जनतालाई बुझाउने काम मेरो हो, न्यायका लागि साथ दिने काम जनताको हो । हामीले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैछौं । बन्द, हडतालदेखि लिएर आमरण अनसनसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हनेछन् ।